နောကျမီး ဖွာသူမြား – My Blog
ကနြေျာ့ဇနီဖွဈသူ အစောနှငျ့ တှဆေုံရခွငျးမှာ အတျောကလေး ထူးသညျတော့မဟုတျပါ။ကနြျောမွို့ဖကျသှားလတေိုငျး အစောတို့ရှာကလေးကို ခဏတဖွုတျလောကျတော့ဝငျပွီး အမောအပနျးဖွရေသညျသာ ဖွဈပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့ အပနျးဖွခေငျြစဖှယျဖွဈရခွငျးမှာလညျး အစောတို့ရှာဦးထိပျတှငျ ထနျးတောကွီးရှိသောကွောငျ့ဖွဈ၏။ထိုထနျးတောအုပျကလေးတှငျ ကနြျောနှငျ့ အစော နှဖူးစာဆုံခဲ့ရခွငျးဖွဈ၏။ တဈနတှေ့ငျ ဈေးဝယျပွီးအပွနျ ထနျရညျအမူးလှနျကာ အပွနျခကျနခြေိနျဝယျ လှညျးမောငျးလာသညျ့အစောက ကနြေျာ့အား သနားညှာတာစှားဖွငျ့ တငျဆောငျခဲ့ပါသညျ။
အစောမှာ တဈခါတဈခါ ကနြေျာ့ထံကို ခေါငျးကလေး သမငျလညျပွနျကွညျ့ပွီး ‘အငျး.. အခုထကျထိ အမူးလညျး မပွသေေးဘူး၊ လူကထနျးရညျတမွမွပမေဲ့ လူကတော့ လူခြောပါ.. အဟိ’ ဟု တယောကျထဲပွောကာ ကွိတျ၍ရယျမောလိုကျပါသေးသညျ။ တဖနျ ကနြျောတကယျပငျအိပျပြျောသတိမရဖွဈနပွေီဟုထငျနသေဖွငျ့ ကနြျော၏နဖူးမြားကို မသိမသာ စမျးသပျလိုကျပွနျသေး၏။ကနြျောသညျ သူ၏သဘောကို သိလိုသောကွောငျ့ အာ-အာ-အငျ-အငျနှငျ့ ညီးညူရာက သူမ၏တငျပါးကွီးကို ခေါငျးနဲ့တိုးယငျး ခါးကို သိမျးဖကျထားလိုကျရာ ရုတျတရကျဆိုသျော ‘အို’ ဟုအသံကလေးက ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့ ပှငျ့ကနျထှကျလာပါတော့၏။
သို့ပမေဲ့ သူကလေးမှာ အာမဋေိတျအသံကလေးနှငျ့ ယောငျယမျးလိုကျပမေဲ့ ရုနျးကနျခွငျးမပွုဘဲ ကနြျောက သူမ၏ခါးကို ယဈဖှဲထားလသေညျ့လကျကွီးကို မရဲတရဲနှငျ့ကိုငျတှယျလကျြရှိပါသညျ။အစော၏ခါးနှငျ့ ပေါငျရငျးကို ထိတှနေ့ရေသဖွငျ့လညျး အစောကတော့ မပွောတတျ။ ကနြျောကတော့ ခဈြရမ်မကျတှေ မီးဟုနျးဟုနျးတောကျလာရပါ၏။ရငျတဈခုလုံးမှာလညျး ရငေတျသူပမာဖွဈလရသလို တဈကိုယျလုံးတှငျလညျး ဓာတျလိုကျခံရသူပမာ တဒိနျးဒိနျးနှငျ့ ဖွဈနတေော့၏။
အစောကိုယျတိုငျလညျး ကနြေျာ့လိုပငျ ခံစာရလကျြရှိကွောငျး မပွောပဲနှငျ့ သိသာလကျြရှိပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော သူမ၏ ကိုယျကလေးမှာ တရှရှေ့ကေ့နြော့ဆီသို့ မှီကလြာသလို နတျပူးသညျ့သဖှယျ တုနျတုနျလှုပျလှုပျကလေး ဖွဈနသေညျကို တှရေ့၏။ ထိုအခြိနျမှာပငျ ခြောငျးတံတားလေးကို ရောကျလာပွီး နှားမြားကို ရတေိုကျလိုကျပါသညျ။
ကနြျောသညျ သူလေး၏ခါးကွီးကို တှယျဖကျထားရာ လကျမြားပွလြေော့ကသြှားပွီး သူကလေး၏ တုတျတုတျဖွိုးဖွိုး ပေါငျတံကွီးမြားအပျေါ လကျရောကျကာ မသိမသာဆုတျကိုငျထားမိ၏။ ကနြျောဆုတျကိုငျထားယုံမက အသာအယာပှတျသပျနသေကဲ့သို့ ပေါငျရငျကိုတိုးဖိကာထားမိပါသညျ။ ထိုသို့ ကနြျော၏အပွုအမူကွောငျ့ပငျ သူကလေးကိုယျတိုငျပငျ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျဖွဈလာဟနျရှိပါသညျ။ကနြျောမှာ ကွာရှညျစှာ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ဘဲ ခကျြခွငျးပငျ သူမဘကျလှညျ့ကာ သူမ၏ ခါးကလေးကို ရဈပတျနလေိုကျမိသညျ။ထို့နောကျမတော့ ကနြောဟာ အစောကိုယျလုံးလေးကို ဆှဲယူလိုကျရာက-‘အစော.. ကိုယျ့ကိုခဈြတယျနျော ခဈြတယျမဟုတျလား’ ဟု အာလုတျသံကွီးနှငျ့ပွောယငျး ကမနျးကတနျးသူလေး၏ ပါးကလေးမြားကို ဘယျပွနျညာပွနျ မှေးလိုကျပါ၏။
ထိုအခါမှာတော့ သူကလေးမှာ မကျြရညျကလေးအဝငျ့သားနှငျ့ ဘာမှပွနျမပွောနိုငျတော့ပဲ-‘လှတျပါ-လှတျပါ အကိုရယျ’‘ဟဲဟဲ- ဘာရမလဲ အစောရယျ အကိုက နိုးနတောကွာပွီ၊ အခုမှ ရှကျမနပေါနဲ့ အစောရာ’ ကနြောက လကျရော နှုတျခမျးရော ပွောငျးဆနျကာအလုပျပေးကာ သူကလေး၏ ကိုယျလေးကို ခပျသှကျသှကျကလေး ပှခြေီ့လကျြ ခွုံတောကွီးအတှငျး ပွေးဝငျမိပါတော့သညျ။ ‘ဟငျ့အငျး.. ဟငျ့အငျး.. ညီမ ဒီအထိတော့ မလိုကျလြောပါရစနေဲ့ အကိုရယျ’အစောခမွာ သနားစရာ တောငျးပနျရှာပမေဲ့ ကြားသတ်တဝါ ကနြျောကတော့ အကွငျနာတှဖေကျ၍ လကျလှတျလိမျ့မညျ မထငျပါနဲ့။
ကနြျောရဲ့ လြှငျမွနျသှကျလကျလှတဲ့ လကျတှကေ အစောရဲ့ အသားစိုငျ အသားခဲတှကေို ဆှဲယူဆုပျကိုငျ ပိုငျနိုငျစှာ အသုံးခနြပေါတယျ။ ပွလြေော့လြော့ အစောရဲ့ ထမီကို ခြှတျလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ ခုံးခုံးမို့မို့ ဖောငျးအိ နတေဲ့ အစောကျဖုတျဟာ လကျတဝါးမြှရှိတာကို ကနြျောဟာ လကျနဲ့ အသာအယာ အုပျကိုငျနသေညျ့အခြိနျမှာ အစောတဈကိုယျလုံး တှနျ့၍လာရာမှ‘အို-အကို ဟငျ့ဟငျ့-ညီမ ရှကျပါတယျ အကိုရယျ’အဲဒီလို ညီးတှားရှတျဆိုနပွေနျပါတယျ။
ကနြျောဟာ တဈဆငျ့ပိုကဲပွီး လကျဝါးကို အစောစောကျဖုတျကှဲကွောငျး တဈလြှောကျ တစောငျးပှတျတိုကျပေးလိုကျပွနျပါတယျ။ အစောမှာလညျး တှနျ့၍တှနျ့၍သှားပွီး သူ့လကျကလေးနဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ လကျမြားကို ဖကျယငျး တဟငျးဟငျး ညီးတှားနရှောတယျ။ ကနြျောလညျး အလှတျမပေးဘဲ အစောရဲ့ တဈကိုယျလုံးကို သိမျးဖကျထားပွီး ပါးမို့မို့ကလေးကိုပါ နှုတျခေါငျးကွီးနဈမွှုပျသှားအောငျ မှေးကွူလိုကျပါတယျ။ ပါးကလေးကို မှေးကွူရာက တဆငျ့ သန်တာရောငျနှုတျခမျးကလေးကို ကနြေျာ့နှုတျခမျးနှငျ့ ငုံပွီး တမြှငျးမြှငျး စုပျယူလိုကျတော့ အစောမှာ အသဲနှလုံးကို ဆှဲယူနှုတျသလို ခံစားလိုကျရ၏။
ကနြျောဟာ အတှအေ့ကွုံရှိထားသူမို့ အပြိုရိုငျးပနျးကလေး အစောကို ကွမျးကွမျးရမျးရမျးမလုပျပဲ အစောစိတျပါလကျပါ ဖွဈလာစရေနျ နူးနှပျ၍နပေါသညျ။ နှုတျခမျးကို စုပျယူနယေငျးက လကျကလညျး အစောရဲ့ အပျေါအင်ျကြီကယျြသီးကလေးတှကေို တဈလုံးခငျြးဖွုတျနပေါသညျ။
ကယျြသီးကလေးတှေ အကုနျလုံးပွုတျသှားသညျ့အခါ တငျးရငျပွညျ့ဖွိုးပွီး လုံးဝနျးနတေဲ့ ရငျနှဈမှာကို အတငျးခြုပျနှောငျထားတဲ့ အတှငျးခံဇာဘျောလီကလေးကို တှရေ့တယျဆိုရငျပဲ ကြှနျတျောဟာ အတှငျးခံဇာဘျောလီခြိတျတှကေို ဖွုတျပွီး ခှာလိုကျတဲ့အခါ အတှငျးခံရဲ့ ဖိနှိပျခြုပျခယျြမှုအောကျမှ လှတျလပျပွီဖွဈတဲ့ ရှရေငျနှဈမှာဟာ ထငျးလငျးစှာ ပျေါထှကျလာပါတော့တယျ။ လုံးဝနျးသညျ့ ရှအေဆငျးဝငျးဝငျးဝါလကျြ နို့သီးလေးက ပတ်တမွားခဲပမာ ရဲရဲနီလကျြရှိပါသညျ။
ကနြျောက အစောရဲ့ နို့ကို လကျဝါးနဲ့ အသာအယာအုပျကိုငျပွီး ဆုတျခပြှေတျသပျပေးယငျးက ဘယျလကျညှိုးနှငျ့ လကျမကွားတှငျ နို့သီးထိပျကလေးကို လှိမျ့ကစားပွီး အမြိုးမြိုးနဲ့ ခြော့မွူထားရာမှ အစောပေါငျနှဈလုံးကို ဘေးတဈဖကျဆီ ကား၍ထားပွီး အစောပေါငျနှဈလုံးကွားထဲငုတျတုတျဝငျထိုငျပွီး ကနြျောရဲ့လီးနဲ့ အစောရဲ့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားလေးကိုပှတျတိုကျပွီး အသာအယာထိုးသှငျးလိုကျပါတယျ။
ထိုအခါ အစောဟာ တှနျ့တှနျ့လူးမြှနာကွငျသှားသလိုရှိပွီး လကျကလညျး ကနြေျာ့ရငျဘတျကို တှနျးထားပွီး‘အား.. အမေ့.. အငျး.. နာတယျ.. နာတယျ.. အကိုရယျ’ပါးစပျကလညျးပွော ခေါငျးတခါခါနှငျ့ ရုနျးကနျနပေါသညျ။ ကနြျောဟာ ဆကျမသှငျးသေးပဲ ရပျထားရာမှ အစောရဲ့ တုနျခါနတေဲ့ နှုတျခမျးလေးကို စုပျနမျးလိုကျပါတယျ။ နို့သီးခေါငျးကလေးကို ငုံ၍ စုပျယူတဲ့အခါမှာ အစောမှာမညျသို့သောအရသာ ခံစားရသညျမသိ။ ပါးစပျမှ တအငျးအငျး တဟငျးဟငျး ညီးညူနရှောပါတယျ။
ကနြျောဟာ သှငျးလကျစလီးကို အသာအယာ အနှုတျအသှငျးပွုယငျးက‘ညီမ.. နာသေးသလားဟငျ..’ လို့ အစောရဲ့ နားနားတိုးကပျပွီးမေးတော့ အစောဟာ မကျြလုံးလေး စုံမှိတျထားရာက မပှငျ့တပှငျ့အသံကလေးနှငျ့-‘နာတာပေ့ါ အကိုရယျ’ လို့ဖွရှောတယျ။
အခုတော့လညျး သူ၏အခြော့အမွူ အနှုးအဆှးကောငျးမှုကွောငျ့ ဖီလငျတကျလာပွနျသညျ။ ကနြျောသညျ တဝကျသာသာဆောငျ့ပေးနရောမှ အစောခံနိုငျလာမှနျးသိ၍ လီးကွီးကို အဖုတျဝသို့ ဒဈပျေါထိဆှဲထုနျပွီး ပွနျဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။အရညျမြားကွောငျ့ ခြောမှစှေ့ာဝငျသှားပွီး အစောတဈခကျြကော့ပေးလိုကျသျောလညျး အသံထှကျမလာတော့ပေ။ ထို့ကွောငျ့ ကနြေျာ့လီးကို အဖြားအထိဆှဲထုတျပွီး အရငျးထိတိုငျဆှကျတိုကျကွီး ဆောငျ့ခပြေးနတေော့သညျ။ အစောမှာ ခံစားရသော အရသာမြားကောငျးနေ၍ ရငျမှာငွိမျ့ကနဲ့ သိမျ့ကနဲ့ ဖွဈနရေတော့သညျ။ တငျးမှာထောငျတနသေော လီးကွီးက အဖုတျအတှငျးသို့ ဝငျသှားသောအခါ ရငျမှာစို့တကျသှားပွီး ပွနျဆှဲထုတျလိုကျသောအခါ ရငျမှာဟာကနျြခဲ့၏။
ထိုအခါမြားတှငျ အစောသူ့ကို အတငျးပငျဖကျတှကျထားမိ၏။ ကနြျောသညျ အစောရဲ့ ဒူးနှဈလုံးကိုဖကျပွီး တဖွညျးဖွညျး တခကျြခငျြးဆောငျ့ဆောငျ့သှငျးနပေါသညျ။ အစောမှာ ခံစားနရေတဲ့ အရသာက တဖွညျးဖွညျးကောငျးလာသလိုရှိသဖွငျ့ ကနြျောရဲ့ကွောကို တအားဖကျထားယငျး ‘အခဈြ… ခဈြ… ခဈြလိုကျစမျးပါ ကိုရယျ… သဘောရှိအကို’ပါးစပျကပွော အောကျကနပွေီး ခါးကလေးကော့ပေးနပေါသညျ။ ကနြျောလညျး အစောကို အစောအလိုကြ အားပါးတရာကုနျးဆောငျ့နပေါတော့သညျ။အရှိနျရလာတော့ ကနြျောမှာ စိတျကို လှတျယငျး အားရပါးရ ဆောငျ့နမေိတော့သညျ။ ‘အို.. အကိုရယျ ဖွညျးဖွညျးဆောငျ့ပါ.. တကယျတညျးမှဘဲ အကိုရယျ… အဟငျ့အဟငျ့’ကနြျောမှာ ပွီးကာနီးမို့ ရှိသမြှအစှမျးကုနျအားပွုပွီး၊ ဖိ၍ဖိ၍ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနပေါသညျ။
အစောမှာ လူးလှနျ့ရာမှ ‘အဟငျ့…ဟငျ့.. အကို.. အကို.. နာနာဆောငျ့လိုးစမျးပါ.. တအားဆောငျ့စမျးပါ. ဟုတျပွီးအကို.. အား..ဟငျ့.. ကောငျး.. ကောငျးလိုကျတာ.. ဟငျးဟငျးဟငျး’ကနြျောလညျး နောကျဆုံးပွီးကာနီးပွီးဖွဈ၍ အစော၏စောကျဖုတျကဉျြးကဉျြးကလေးထဲသို့ အခကျြနှဈဆယျခနျ့ ဆကျတိုကကွီး ဆောငျ့လိုးထညျ့လိုကျရာ၊ အစောမှာ တဈကိုယျလုံး သိမျ့သိမျ့တုနျခါပွီး ကနြေျာ့ကို သိမျးကွုံးပှဖေ့ကျလိုကျခြိနျမှာ နှဈဦးသာ လောကအရသာကို တငျးပွညျ့ကပျြပွညျ့ ခံစားလိုကျရပါတော့သညျ။ ကနြေျာ့ဇနီးအစောနှငျ့ရခဲ့သညျမှာလညျး ဤအဖွဈအပကျြကလေးက စခဲ့ပါသညျ။
ကနြျောတို့အိမျကလေးမှာ ရှာအစှနျတှငျရှိပွီး ကနြျော၏ဇနီးအသံကိုလညျး မကွား၊ မီးခိုးလညျးမတှရေ့။ ကနြောသညျ နှားတငျးကုနျးထဲဝငျလာကာ အိမျမဆီသို့ လှမျးလာခဲ့သညျ့တိုငျအောငျ အစော၏အသံမှာ လုံးဝပြောကျကှယျနပေါသညျ။ ကနြျောအိမျအနီးကပျလာကာ ထရံပေါကျမှ ခြောငျးကွညျ့ရနျအတှကျ ကုနျးလိုကျစဉျမှာပငျ-‘ကိုခိုငျ.. ပွနျပါတော့.. အိမျကလူကွီးကို ထမငျးသှားပို့ရအုံးမယျ.. ကိုခိုငျရယျ’ ဟု ပွောလိုကျသံကွောငျ့ ကနြျော၏ ဦးခေါငျးမှာ ခြာခြာလညျးသှားတော့သညျ။ ထိုအသံကွောငျ့ လြှငျမွနျစှာ ထရံပေါကျမှ ခြောငျးကွညျ့လိုကျရာ၊ ပဒုမပေါငျတို ဇာတျခငျးနသေညျကို ဘှားကနဲ တှရေ့ပါသညျ။ ဇာတျလိုကျက အံ့သွစှာကွုံတှရေ့ပါ၏။ ကနြျော၏ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး ဖွဈနသေောကွောငျ့ပါ။ သူတို့နှဈဦး၏ မွငျကှငျးမှာလညျး ရှငျးလငျးလှပါသညျ။
အငျမတနျမှလညျး ရဲရဲတငျးတငျး ဆကျဆံနသေညျကို တှရေ့ပါသညျ။‘မွနျမွနျရှငျ.. မွနျမွနျ.. ရှငျဟာ ဇှတျကွီးပဲ’‘ဟဲဟဲဟဲ.. ငါက ဇှတျမဟုတျရပါဘူးကှာ.. မငျးကစလို့ ငါကလိုးနရေတာမဟုတျလား’ခိုငျဦး၏အသံက ပျေါထှကျလာခဲ့ပါသညျ။ ကနြျောသညျ သူငယျခငျြးကို ယုံစားမိသောကွောငျ့လာ၊ တဖနျ ကနြေျာ့မိနျးမ အစောကိုယျတိုငျကလညျး တဏှာကွီးလှသော မိနျးမတဦးမို့လား၊ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကနြေျာ့အဖို့ အတျောကလေး ဒေါသဖွဈလာသျောလညျး၊ သူတို့နှဈပါကွညျဇာတျထုတျကို အစအဆုံးကွညျ့နမေိပါသညျ။ ခိုငျဦးရော အစောပါ အဝတျအစားမရှိကွပါ။ အစောမှာ တကိုယျလုံးဖွူဖှေးသောအဖွဈက သူ၏တငျပါးကွီးတှေ ကော့ကော့ကာ ထုံးစံအတိုငျးပငျ ကော့ပေးနသေလို ခိုငျဦးကလညျး အစော၏ပေါငျနှဈလုံးကို သူ့အပေးဆှဲတငျကာ ဒလကွမျး အသောနှငျလကျြ ကာမဇာတျထုတျကွီးကို သှငျသှငျကွီးခငျးနပေါ၏။
ခိုငျဦး၏လီးကွီးကလညျး အတျောကလေးပငျ ချေါတောဆနျဆနျကွီးမားလှသလို တအားဆောငျ့ကာဆောငျ့ကာလိုးလိုကျသောအခါမှာတော့ အစော၏တငျပါးကွီးတှပေငျ ကွုံ့ကာကွုံ့ကာ ဝငျသှားတော့သညျကို တှရေ့ပါသညျ။ ကနြျော၏စိတျတှမှောလညျး မီးဟုနျးဟုနျးတောကျကာလာရပါ၏။ ခပျစောစောက ဆာလောငျမှတျသိပျခွငျးအပွညျ့နှငျ့ မိုးသဲလသေဲပွေးလှားလာရခွငျးတှသေညျ ကွကျပြောကျငှကျပြောကျ ပြောကျကှယျ၍ သှားတော၏။
ကနြျောသညျ နောကျပွနျဆုတျလိုကျပါသညျ။ ကနြျောလာခဲ့သညျမှာ သိပျမကွာလှသေးပါ။ ထိုသို့သောအခြိနျဝယျ ဒငျးတို့နှဈယောကျကို သုတျသငျပဈရနျ အကောငျးဆုံးအခြိနျမို့ ကနြျောသညျ နံရံတှငျထိုးထားသော ကိုငျးခုတျဓားကိုယူ၍ အိမျပျေါသို့ လြှငျမွနျစှာတကျပွီး သစ်စာဖောကျသော သူငယျခငျြးနှငျ့ ဖောကျပွနျသော မိနျးမကို အဆုံးစီရငျလိုကျပါတော့သညျ။ အလှညျ့မရှောငျ ဝရမျးပွေးဂပြနျမြားကွီးစိုးသောအခြိနျ ကြှနျတျောရှာတှငျ မနရေဲတော့ပါ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ကနြေျာ့မိနျးမ အစောနှငျ့ ခိုငျဦးကို သတျခဲ့မိသညျ့အတှကျ ကြှနျတျော ဝရမျးပွေး လူသတျသမားဖွဈခဲ့ရပါသညျ။
ကနြျောထှကျပွေးလိုကျခွငျးမှာ ပိုဆိုးသှား၏။ ကနြျောထှကျပွေးရာကပငျ အထူးနာမညျကွီးလှသော ဓားမွ ဗိုလျယက်ခလကျအောကျသို့ ရောကျသှား၏။ ကနြျောမှာ ငယျရှယျသူဖွဈသညျ့အပွငျ လူသတျဝရမျးပွေးတဈယောကျမို့ ဗိုလျယက်ခအနဖွေငျ့ အတျောကလေးသဘောကသြှားပွီး ကနြေျာ့ကို သူကိုယျတိုငျ သနေတျပဈသငျပေးမညျ့အကွောငျး ပွောပါသညျ။ အံ့သွစရာကောငျးလှသညျမှာ ဗိုလျယက်ခတှငျ မိနျးမနှဈယောကျယူထားခွငျးဖွဈရာ၊ တဈဦးက အသကျငယျငယျရှယျရှယျလေးဖွဈသလို တဈဦးကလညျး အသကျနှဈဆယျခနျ့ကျောလိမျ့မညျ မဟုတျပါ။ ရုပျခြောကလေးတှဖွေဈရာ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျရောဘာမြှ အပွဈဆိုစရာတဈရှေးသာမြှမရှိပါ။
ယခုလို အခြောအလှကလေးတှမွေငျရသောအခါ ကနြေျာ့ရငျထဲလှုပျရှားသှားသညျကတော့ မှနျပါသညျ။ ကနြေျာ့ကို ဗိုလျယက်ခက သနေတျပဈသငျပေးရာတှငျ ဆယျရကျအတှငျး ခွောကျလုံးပွူရော ရိုငျဖယျအပဈပါ ကြှမျးကငျြခဲ့လေ၏။ နောကျဆုံတှငျ ကနြျောမှာ ဗိုလျယက်ခ၏ လူယုံတဈဦးဖွဈခဲ့၏။ သူသညျ ကနြေျာ့ကို စိတျခယြုံကွညျသညျ့အတိုငျး တဈခါတဈရံ စခနျးတှငျ အစောငျ့ထားခဲ့သညျ။
တဈနမှေ့ာတော့…‘ရှငျ့ကိုကွညျ့ရတာ တမှိုငျမှိုငျနဲ့ မမတို့ဆီမှာနရေတာ မပြျောဘူးလား’အနှငျးမှာ ကနြေျာ့ထကျ အမြားကွီးငယျသညျ့တိုငျအောငျ သူ့ကိုယျသူ မမဟု ချေါခဲ့သညျကွောငျ့ ကနြျောက သိပျပွီးရီခငျြနပေါသညျ။ ‘ရှငျဒီမှာနရေတာ မပြျောဘူးလား’‘ပြျောတယျဗြာ… ပြျောတယျ’‘အမလေး.. ရှငျကလညျး စိတျကွီးပါဘဲလား’‘လူတဈယောကျမှာ စိတျတဈခုတော့ ရှိတာပေ့ါ’‘ဟား.. ဟား.. ဟား.. သိပျရယျစရာစကားပွောတဲ့လူဘဲ.. ရှငျဘာလဲ.. ရီးစာပကျြလာလို့လား.. ဒါမှမဟုတျ မယားလငျငယျနပွေီး သူမြားနောကျလိုကျသှားလို့လား’ထိုစကားကွားလိုကျသောအခါ ကနြေျာ့မှာ အနာပျေါဒုတျကသြှားသလို ဆတျဆတျခါ နာမိလသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဗွုံးကနဲ မတျတပျရပျကာ အနှငျး၏ ပုခုံးကို ခပျကွမျးကွမျးကလေး ဆှဲကိုငျမိ၏။
‘ရှငျကမြပွောလိုကျတာမြား စိတျဆိုးသှားသလားဟငျ’‘ကနြေျာ့ကိုထပျမံပွီး ဘုစကားပွောတာထကျ ခငျဗြားလငျတျောမောငျ ငှဘေယျလောကျ.. ရှဘေယျလောကျ ရလာမလဲ တှကျနတောက ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျနှော’‘ကမြဟာ ရှငှေမေကျတဲ့ မိနျးမမဟုတျသလို သူ့ကိုလညျး ခဈြလို့ယူရတာမဟုတျဘူး အတငျးဓားမွတိုကျပွီး သိမျးပိုကျထားလို့ ယူနရေတာ’‘အနှငျးက ရဲတငျးစှာပငျ ကနြေျာ့လကျကိုကိုငျပွီး‘ကမြရှငျ့ကို အားကိုးပါရစလေား’
‘ကြုပျ.. ဗိုလျယက်ခကို သစ်စာမဖောကျဘူး’‘ကမြ.. ရှငျ့ကို မွငျမွငျခငျြးဘဲ အားကိုးတယျ.. ယုံကွညျမိတယျ.. ကမြကိုသာ ကယျမယျဆိုရငျ ရှငျ့သဘောရှိပါ.. ရှငျ့ကိုလဲ မွငျမွငျခငျြး ခဈြနခေဲ့မိတာဘဲ’သူမသညျ ကနြေျာ့ရငျခှငျအတှငျး သူ့ကိုယျလုံးကလေး ပဈလှဲခလြိုကျပါသညျ။ ကနြေျာ့စိတျတှမှော ဒိနျးကနဲဖွဈသှားရ၏။
မိနျးမတှေ ဖောကျပွားမှုက လကျတှတှေ့နေရေခပြွေီ။ ကနြေျာ့ခဈြဇနီးအစောသညျ ကြှနျတျောမရှိတုနျး နောကျမီးလငျးခဲ့သလို ဗိုလျယက်ခဇနီးခြောကလေးမှာလညျး နောကျမီးလငျးရနျ မွူဆှယျနပွေီဖွဈပါသညျ။ ကနြျောက သူမကို ခပျကွမျးကွမျးတှနျးဖယျ ပဈလိုကျသောအခါ သူမက နှုတျခမျးကလေးစူလိုကျကာ ‘ရှငျ.. ကမြကို မခဈြဘူးလား’‘ငါ.. မငျးကို သနားတယျ.. ပွီးတော့ သစ်စာလညျး မဖောကျခငျြဘူး’‘ရှငျတျောတျောမိုကျတာဘဲ.. ဒီနရောမြိုးဟာ လူပွတျတဲ့နရော ဘယျသူမှမရှိဘူး၊ ရှငျ့ကို ကမြကခဈြနတေယျ.. ပွောငျဘဲပွောတဲ့ဟာကို ငွငျးပယျရငျ ရှငျ့ဆရာကို ကမြက တနညျးနညျးနဲ့ ဂြောကျတှနျးရမှာဘဲ’ကနြျောသညျ ထောငျးကနဲ့ ဒေါသထှကျသှားပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ သူမပုခုံးကို ခပျကွမျးကွမျး ဆုပျကိုငျလိုကျပွီး‘မငျးလဲ နောကျမီးလငျးခငျြတဲ့ မိနျးမတဈယကျေဘဲ.. ကဲ.. မငျးလိုခငျြတာ ကာမဘဲမဟုတျလား.. ရှငျးရှငျးပွောဟေ့ ကြုပျက ရှငျးရှငျးဘဲကွိုကျတယျ’ကနြျောက ထိုကဲ့သို့ မကျြလုံးမကျြဆံပွူးမေးလိုကျသောအခါ အနှငျးမှာ မကျြနှာကလေးပျေါတှငျ သှေးခွဥေကလေး ပျေါထှကျလာကာ ရှကျသှားဟနျရှိပါသညျ။ ‘ခုမှ ရှကျမနပေါနဲ့ကှာ.. ကဲ.. ကဲ.. ငါ့ကိုလညျး ဂြောကျမတှနျးနဲ့တော့.. မငျးအင်ျကြီတှေ ခြှတျစမျး’‘အို ဘာလို့ခြှတျရမှာလဲ’ဒီတဈခါတော့ အနှငျးမှာ ပိုမိုရှကျသှားဟနျတူပါသညျ။ ကနြျောက ခပျခဉျြခဉျြရှိလသေောကွောငျ့ သူကလေူအား ခပျကွမျးကွမျးပွောဆိုနခွေငျးဖွဈသညျ။
‘မငျးအခုမှ ရှကျနသေလား.. ငါ့ကို ခဈြတယျဆို ငါကလညျး ဘှငျးဘှငျးဘဲ.. ခပျရှငျးရှငျးဘဲ ခဈြပွမယျ.. မငျးရဲ့ တကိုယျလုံး အဝတျအစားတှခြှေတျကှာ’ကနြျောမှာ ခပျစောစောကလို မဟုတျတော့ဘဲ ယခုလို နီးနီးစပျစပျရှတေ့ျောရောကျလာသူလေးအား လကျမလှတျခငျြတော့၍ ဆူဆူဖွိုးဖွိုးကိုယျလုံးကလေးကို ဗွုံးကနဲ ဆှဲယူကာ သူကလေး၏ပါးရော လညျပငျးပါ ဒလစပျနမျးလိုကျမိသညျ။
ကနြျော၏ မွနျဆနျမှုမှာ အံ့သွစရာ သူမ၏ယောကျြားအကြီသဖှယျခြုပျထားသော စဈအင်ျကြီကယျြသီးတှကေို ခပျသှကျသှကျကွီး ဖွုတျပဈလိုကျသညျ။ ကယျြသီးတှေ ပွုတျသှားလြှငျ အတှငျးမှ တငျးတငျးရငျးရငျး ပွညျ့ပွညျ့ဖွိုးဖွိုးနှငျ့ ဖှံဖွိုးကားပျေါထှကျနသေော အတှငျးခံဘျောလီအင်ျကြီအတှငျးမှ ရငျသားအနညျးငယျ ပျေါထှကျနသေညျကို တှရေ့ပါသညျ။ ယခုအခါတှငျ အနှငျးမှာ မွပွေငျပျေါတှငျ ကိုယျကိုလှဲခလြကျြ ဘျောလီအင်ျကြီမှ တှယျထားလသေော ဂြိတျကွီးမြားကို သူမကိုယျတိုငျက ရကျရကျရောရောနှငျ့ ဖွုတျခပြဈလိုကျပါသညျ။
ဘျောလီဂြိတျကလေး ပွုတျသှားလြှငျ ဝငျးဝငျးဝါဝါနှငျ့ တုနျတုနျလှုပျလှုပျကလေး ရငျသားအစုံမှာ ကနြေျာ့နှလုံးကို ခုနျ၍သှား၏။ ကနြျော သူမ၏ပါးမို့မို့ကလေးကို ကုနျး၍နမျးလိုကျပါသညျ။ အနှငျးမှာ ကနြျော၏ ရငျပတျကယျြကွီးအောကျတှငျ ပွားပွားဝပျနပေါသညျ။ သူမ၏အလှဖူး ရငျသားထိပျမှ နို့သီးလုံးကလေးတှကေို တပွှတျပွှတျစုပျယူနရောကပျ ကနြျော၏လကျမြားမှာ သူမ၏အောကျပိုငျးကို တရှရှေ့ေ့ ပှတျသပျနမေိရာ နှငျး၏ ဖွူဖှေးတုတျဖွိုးနသေော ပေါငျတံကွီးတှကေ အလိုလိုပငျ အပျေါသို့ ထောငျကားလာပါတော့သညျ။
သူမ၏ ပိုးပြော့ထမီကလေးမှာလညျး လြှောကနဲနအေောငျပငျ မွပွေငျဝယျ ပုံကသြှားလတေော့သညျ။ ထိုအခါမှတော့ အအိုဟုသာ ဆိုလငျ့ကစား ဖောငျးဖောငျးကွှကွှဖွိုးဖွိုးလှလှ အသားအစိုငျအခဲကလေးမြားမှာ သူ့နရောနှငျ့သူ အပွဈဆိုမရအောငျ တညျရှိနသေလို နှဈသှယျသော မကျြနှာသှယျကွားမှ စောကျဖုတျကလေးသညျ ဖူးပှငျ့ကာ ခိုနားခငျြစဖှယျတညျရှိနေ၏။
ကနြျောသညျ အနှငျး၏ ကိုယျလုံးလေးကို ပှတျသပျပေးယငျး နို့သီးကလေးကို စုပျယူနရောမှ လြှာဖွငျ့ထိုးကလိပေးလိုကျသညျ။ အနှငျးမှာ တှနျ့တှနျ့သှားကာ ရငျကိုကော့ပေးနယေငျးမှ‘အဟငျ့ဟငျ့.. ယားတယျ.. အဟိ’ကနြျောသညျ အထကျပိုငျးရှိ နှုတျခမျး၊ လညျတိုငျ၊ ရငျသား၊ ခါး၊ နောကျကွောပွငျတို့ကို ပှတျသပျပေးခွငျးဖွငျ့ ကာမခလုတျတို့ကို ဖှငျ့လသေညျ။ လကျတဈဖကျကလညျး အနှငျး၏ အတှငျးသားတို့ကိုလညျးကောငျး၊
ပေါငျဂှဆုံရှိ ဖောငျ့မို့မို့စောကျဖုတျကို ပှတျသပျလရော အနှငျးမှာ တဟငျ့ဟငျ့ ကာမဆိပျမြား တကိုယျလုံးသို့ ပြံ့နှံ့ကုနျ၏။အနှငျး၏ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကလေးမှ ပွူးထှကျနသေော စောကျစကေ့လေးကို လကျညှိုးနှငျ့ လကျမညှပျကာ အသာအယာဆှဲပေးသောအခါ အနှငျးမှာ တှနျ့ကနဲဖွဈသှား၍ စောကျစကေ့လေးမှာလညျး မာတတျတတျနှငျ့ ခြှနျတောငျမတျလာလသေညျ။အနှငျ့မှာ ကာမအဓိကသော့ခကျြ စောကျစကေ့လေးကို သခြောစှာ ကလိခံနရေသောကွောငျ့ ခါးကလေးတှ့နျတှနျ့ကာသှား၏။
ဖငျကလေး မွှောကျမွှောကျကာ သှား၏။ လြှပျစဈနှငျ့ တို့သလို ဖွတျဖွတျလူးမြှ ခံစားနရေ၏။ ‘အို.. ယားတယျ- အဟိ.. ကမြမနနေိုငျတော့ဘူး၊ စောကျဖုတျထဲက သိပျယားလာပွီ- လုပျပါတော့- ဟငျးဟငျးဟငျး’အနှငျးမှာ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ ဖွဈလာကာ ကနြေျာ့ကို တငျးကွပျစှားဖကျထားတော့၏။ အနှငျး၏စောကျဖုတျကို ကိုငျ၍ပှတျသပျပေးနသေော ကနြော့လကျမြားကွောငျ့ ကာမစိတျမြား ထကွှလာကာ အနှငျး၏စောကျဖုတျမှ အရညျကွညျတို့ စိုစိစိ ဖွဈနလေေ၏။
ကနြော့အဖို့ သညျလိုအခွအေနတှေငျ ပိုကောငျးသောကွောငျ့ အနှငျးကိုယျလုံးကလေးကို မွပေျေါတှငျလှဲလိုကျစသေညျ။ အနှငျး၏ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဘေးသို့ကားလိုကျစရော ဖွူဖှေး၍ ဖောငျးဖောငျးအိနသေော စောကျဖုတျမှာ ဟပွဲကလေး ဖွဈသှား၏။ စောကျစကေ့လေးအောကျမှ စောကျခေါငျးကလေးမှာ ခံခငျြလာပွီး ပှစိပှစိဖွဈနလေသေညျ။ ကနြောသညျ ဝတျထားသောပုဆိုးကို ခြှတျလိုကျ၏။
ထိုအခါ ကနြေျာ့လီးကွီးမှာ အနှငျး၏ စောကျခေါငျးထဲတှငျ ပြျောမွူးနခေငျြရှာသောကွောငျ့ တဆတျဆတျနှငျ့ ခေါငျးညိမျ့နရှောလသေညျ။ကနြျောသညျ တဆတျဆတျနှငျ့ မာ၍တောငျနသေော လီးကို လကျဖွငျ့ကိုငျ၍ အနှငျး၏ပေါငျကွားထဲသို့ ဆောငျ့ညောငျ့ဝငျထိုငျပွီး အနှငျး၏စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးကလေးကို အထကျအောကျပှတျတိုကျပေးရာ အနှငျးမှာ ကိုယျကလေးတှနျ့၍ ဖငျကိုမွှောကျပေးယငျး- ‘အကိုရယျ ကမြသိပျယားလှနျးလို့ လိုးမှာဖွငျ့ မွနျမွနျလိုးစမျးပါ’အနှငျးမှာ ရမ်မကျတံခိုးမြားတကျကွှသောလသေံဖွငျ့ ကနြေျာ့ကို တဈလုံခငျြးပွောနေ၏။
ကနြျောသညျ ရှုံ့လိုကျ ကယျြလိုကျဖွဈနသေော အနှငျးစောကျဖုတျအဝကို ကနြေျာ့လီးထိပျနှငျ့ တေ့၍ အသာဖိခလြိုကျရာ အနှငျး၏စောကျခေါငျးထဲသို့ လီးတဈခြောငျးလုံး တငျးကွပျစှာ ဝငျသှားတော့၏။ ‘အား- ကောငျးလိုကျတာရှငျရယျ’အနှငျးမှာ သူမစောကျခေါငျးထဲဝငျစခေငျြသော ကနြေျာ့လီးကွီး ဝငျသှားသောကွောငျ့ ကာမဆန်ဒပွညျဝသှားလသေညျ။ ကနြျောသညျ လီးကို အနှငျးစောကျဖုတျထဲသို့ အရငျးအထိ သိပျသှငျးကာ ဖိကပျထား၏။ ထို့နောကျ အသာပွနျကွှ၍ တဖတျဖတျနှငျ့ ကွှခြီ ထိုးခြီ လိုးနလေတေော့၏။
အနှငျး၏စောကျဖုတျ၊ စောကျစနေ့ရော၊ အခြိုငျ့အရှိုကျ၏ ဖောငျ့မို့သော နှုတျခမျးသာတို့နှငျ့ ကနြေျာ့လီးအရငျးထကျနားမှ အသာပွငျတို့ ရိုကျခတျသံကွောငျ့ တဖတျဖတျ တဖောကျဖောကျ မွညျသံတို့မှာ ဆူညံနေ၏။ ကနြျော၏လီးကို အနှငျး၏စောကျဖုတျမှ ဆှဲအနှုတျတှငျ ပွှတျကနဲအသံကွားရသလို ပွနျ၍ဆောငျ့သှငျးလိုကျသောအခါ စှိ ဟု ထှကျလာပွနျသညျ။ အမှတျတမဲ့ဘေးမှ နားထောငျနသေူရှိပါက ထိုနရောမှာပငျ ထိုအသံနှငျ့ ယောကျြားမိနျးမမရှေး ကာမအရတေို့ ထှကျကနြိုငျပေ၏။အနှငျးမှာ ကနြေျာ့ပုခုံးကို လကျနှဈဖကျနှငျ့ကိုငျ၍ ကော့၍ကော့၍ပေးနလေေ၏။ ထို့ကွောငျ့ စောကျဖုတျကွှကျသားမှာ ရှုံ့ရှုံ့သှားရာ ကနြျော၏လီး ပွနျအသှငျးတှငျ ကပျြကပျြသှား၏။ ကနြော့မှာ ပို၍ပို၍ ကောငျးမှနျနေ၏။
ကာမဖီလငျမြား တဖွညျးဖွညျးတကျလာသောကွောငျ့ နှဈဦးစလုံး ဖိနျးကနဲ ရှိနျးကနဲ ဖွဈသှားကွကာ ကနြော့လီးမှ သုတျရညျမြား အနှငျးစောကျဖုတျထဲသို့ နှေးကနဲ တဆဈဆဈ ထှကျကုနျလသေညျ။အနှငျးမှာ ကနြေျာ့ကိုယျလုံးကို တအားဖကျ၍ တှနျ့ကနဲ တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှားလသေညျ။ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ ဖကျထားသော လကျမြား ပွလြေော့သှား၏။ ကနြေျာ့လီးမှ သုတျရညျမြားက အနှငျး၏ စောကျခေါငျးထဲမှ အပွငျသို့ ဖငျကွားမှ စီးဆငျးကာ ပုဆိုးပျေါသို့ စိုကုနျလတေော့သညျ။
အနှငျး၏ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျမှာ အစောထကျပငျသာလှ၏။အနှငျးက အစောလောကျကိုယျလုံးကိုယျထညျ မဖှံ့ဖွိုးပမေဲ့ တငျကွီးတှကေ အစောထကျပငျ စှဲမကျစရာကောငျးနပေါသညျ။ထမီမရှိသော တငျပါးနှငျ့အတူ ဖွိုးဖွိုး မွမွ ကွှကွှရှရှလှပလသေညျ့ ပေါငျတံတှနှေငျ့ သှယျဖွာသှားလသေော ခွသေလုံးသားမြားက သူမ၏အလှသရုပျကို အငျမတနျမှ အထောကျအကူဖွဈလေ၏။တဖနျသူမ၏ မကျြလုံးမကျြခုံး မကျြတောငျမြားအောကျမှ မကျြလုံးးမြားမှာ ပတ်တမွားလေးနှဈလုံးပမာ တလကျလကျဝငျးလကျလကျြရှိ၏။
အပြိုတုံးကဆိုလြှငျ ထိုမကျြလုံးအစုံမှာ အဘယျမြှ ပိုမိုကွညျ့ကောငျးမညျကို မခနျ့မှနျးနိုငျအောငျဖွဈရ၏။ ယခုပျင သူကလေး၏ မကျြလုံးအစုံမှာ အညှို့ဓာတျအပွညျ့နှငျ့အတူ သူမ၏ တငျပါးကွီးတှကေို မွှငျ့ကာ မွှငျ့ကာပေးလိုကျယုံမက သူမကိုယျတိုငျကလညျး ရမ်မကျဇောပွငျးထနျပွီး ကနြေျာ့နှုတျခမျးတှကေို တအားကုနျငုံ၍စုပျယူလိုကျ၏။လညျပငျးတှကေိုရော နားရှကျတှကေိုပါ မနာမကငျြကိုကျလိုကျပွီး တဟငျ့ဟငျ့ ဖွဈနရှော၏။
သူမသညျ ကနြျော၏ကွောပွငျကို တငျးတငျးကွပျကွပျ အသကုနျဖကျထား၏။ လကျတဖကျကလညျး ကနြျော၏ခါးကို ထိုးလိုကျ။ ရငျပတျကယျြကွီးကို ဆှဲလိုကျနှငျ့ ရမ်မကျဟုနျကို ပွသလြှကျရှိပါသညျ။ ကနြျောနှငျ့ အနှငျးတို့မှာ ဘကျညီညီ၊ ကနြျောကလိုးလိုကျ၊ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး သူမက အကော့၊ အပငျ့၊ အမွှောကျတို့နှငျ့ ပေးနသေညျမို့ ကနြျောက ခပျကွမျးကွမျးလေး ဆောငျ့ပွလိုကျရာတှငျ သူမမှာ ခါးကလေး ခှကျဝငျသှားသညျအထိ အငျ့ကနဲ အငျ့ကနဲ အသံမွညျသှားသလို အပွုံးပှငျ့တှမှောလညျး ဝငျ့ကာ ဝငျ့ကာလာသညျကို တှရေ့၏။
နောကျဆုံးမတော့ သူကလေးက‘ရှငျဟာ ကမြတှခေဲ့ဘူးတဲ့ယောကျြားတှထေဲမှာတော့ စှဲမကျစရာပါဘဲရှငျ’‘ရှငျက ကမြကို မသှေ့ားပွီပေ့ါလေ’‘အို-ဘယျမှာ မနေို့ငျမှာလဲအနှငျး တကယျပါ- အနှငျးကို မမပေ့ါဘူး’ကနြျောမှာ ယခုအခါ မိနျးမတှသေဘောကအြောငျ ပွောဆိုတတျသောအနအေထားကို ရောကျခဲ့ပွီမို့ အရငျက မိနျးမတှကေို မုနျးလို့ ကငျးကငျးနခေဲ့သလောကျ ယခုတော့ မိနျးမတှကေို ကိုယျကခြော့နိုငျသလောကျ သူတို့ကလေးတှကေို ကိုယျကလိုကျပေးနိုငျသဘောကျ ကိုယျ့အတှကျ ဘဲရီးဂှတျပါလား ဟူသောအတှေးဖွငျ့ ဆေးဆောငျစရာမလိုသောအဖွဈကို ရောကျလာရပါတော့သညျ။ဗိုလျယက်ခ အပွငျထှကျသှားသညျဆိုလြှငျ နတေို့ငျးဆိုသလို အနှငျးမှာ ကနြေျာ့ထံရောကျလာစမွဲဖွဈရာ တီတီတာတာ ပွောဆိုနမွေဲဖွဈပါတော့သညျ။
ကျနော့်ဇနီဖြစ်သူ အစောနှင့် တွေဆုံရခြင်းမှာ အတော်ကလေး ထူးသည်တော့မဟုတ်ပါ။ကျနော်မြို့ဖက်သွားလေတိုင်း အစောတို့ရွာကလေးကို ခဏတဖြုတ်လောက်တော့ဝင်ပြီး အမောအပန်းဖြေရသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အပန်းဖြေချင်စဖွယ်ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်း အစောတို့ရွာဦးထိပ်တွင် ထန်းတောကြီးရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏။ထိုထန်းတောအုပ်ကလေးတွင် ကျနော်နှင့် အစော နှဖူးစာဆုံခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။ တစ်နေ့တွင် ဈေးဝယ်ပြီးအပြန် ထန်ရည်အမူးလွန်ကာ အပြန်ခက်နေချိန်ဝယ် လှည်းမောင်းလာသည့်အစောက ကျနော့်အား သနားညှာတာစွားဖြင့် တင်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
အစောမှာ တစ်ခါတစ်ခါ ကျနော့်ထံကို ခေါင်းကလေး သမင်လည်ပြန်ကြည့်ပြီး ‘အင်း.. အခုထက်ထိ အမူးလည်း မပြေသေးဘူး၊ လူကထန်းရည်တမြမြပေမဲ့ လူကတော့ လူချောပါ.. အဟိ’ ဟု တယောက်ထဲပြောကာ ကြိတ်၍ရယ်မောလိုက်ပါသေးသည်။ တဖန် ကျနော်တကယ်ပင်အိပ်ပျော်သတိမရဖြစ်နေပြီဟုထင်နေသဖြင့် ကျနော်၏နဖူးများကို မသိမသာ စမ်းသပ်လိုက်ပြန်သေး၏။ကျနော်သည် သူ၏သဘောကို သိလိုသောကြောင့် အာ-အာ-အင်-အင်နှင့် ညီးညူရာက သူမ၏တင်ပါးကြီးကို ခေါင်းနဲ့တိုးယင်း ခါးကို သိမ်းဖက်ထားလိုက်ရာ ရုတ်တရက်ဆိုသော် ‘အို’ ဟုအသံကလေးက ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် ပွင့်ကန်ထွက်လာပါတော့၏။
သို့ပေမဲ့ သူကလေးမှာ အာမေဋိတ်အသံကလေးနှင့် ယောင်ယမ်းလိုက်ပေမဲ့ ရုန်းကန်ခြင်းမပြုဘဲ ကျနော်က သူမ၏ခါးကို ယစ်ဖွဲထားလေသည့်လက်ကြီးကို မရဲတရဲနှင့်ကိုင်တွယ်လျက်ရှိပါသည်။အစော၏ခါးနှင့် ပေါင်ရင်းကို ထိတွေ့နေရသဖြင့်လည်း အစောကတော့ မပြောတတ်။ ကျနော်ကတော့ ချစ်ရမ္မက်တွေ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လာရပါ၏။ရင်တစ်ခုလုံးမှာလည်း ရေငတ်သူပမာဖြစ်လရသလို တစ်ကိုယ်လုံးတွင်လည်း ဓာတ်လိုက်ခံရသူပမာ တဒိန်းဒိန်းနှင့် ဖြစ်နေတော့၏။
အစောကိုယ်တိုင်လည်း ကျနော့်လိုပင် ခံစာရလျက်ရှိကြောင်း မပြောပဲနှင့် သိသာလျက်ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမ၏ ကိုယ်ကလေးမှာ တရွေ့ရွေ့ကျနော့ဆီသို့ မှီကျလာသလို နတ်ပူးသည့်သဖွယ် တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်ကလေး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထိုအချိန်မှာပင် ချောင်းတံတားလေးကို ရောက်လာပြီး နွားများကို ရေတိုက်လိုက်ပါသည်။
ကျနော်သည် သူလေး၏ခါးကြီးကို တွယ်ဖက်ထားရာ လက်များပြေလျော့ကျသွားပြီး သူကလေး၏ တုတ်တုတ်ဖြိုးဖြိုး ပေါင်တံကြီးများအပေါ် လက်ရောက်ကာ မသိမသာဆုတ်ကိုင်ထားမိ၏။ ကျနော်ဆုတ်ကိုင်ထားယုံမက အသာအယာပွတ်သပ်နေသကဲ့သို့ ပေါင်ရင်ကိုတိုးဖိကာထားမိပါသည်။ ထိုသို့ ကျနော်၏အပြုအမူကြောင့်ပင် သူကလေးကိုယ်တိုင်ပင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာဟန်ရှိပါသည်။ကျနော်မှာ ကြာရှည်စွာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ချက်ခြင်းပင် သူမဘက်လှည့်ကာ သူမ၏ ခါးကလေးကို ရစ်ပတ်နေလိုက်မိသည်။ထို့နောက်မတော့ ကျနောဟာ အစောကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲယူလိုက်ရာက-‘အစော.. ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်နော် ချစ်တယ်မဟုတ်လား’ ဟု အာလုတ်သံကြီးနှင့်ပြောယင်း ကမန်းကတန်းသူလေး၏ ပါးကလေးများကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် မွှေးလိုက်ပါ၏။
ထိုအခါမှာတော့ သူကလေးမှာ မျက်ရည်ကလေးအဝင့်သားနှင့် ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲ-‘လွှတ်ပါ-လွှတ်ပါ အကိုရယ်’‘ဟဲဟဲ- ဘာရမလဲ အစောရယ် အကိုက နိုးနေတာကြာပြီ၊ အခုမှ ရှက်မနေပါနဲ့ အစောရာ’ ကျနောက လက်ရော နှုတ်ခမ်းရော ပြောင်းဆန်ကာအလုပ်ပေးကာ သူကလေး၏ ကိုယ်လေးကို ခပ်သွက်သွက်ကလေး ပွေ့ချီလျက် ခြုံတောကြီးအတွင်း ပြေးဝင်မိပါတော့သည်။ ‘ဟင့်အင်း.. ဟင့်အင်း.. ညီမ ဒီအထိတော့ မလိုက်လျောပါရစေနဲ့ အကိုရယ်’အစောခမြာ သနားစရာ တောင်းပန်ရှာပေမဲ့ ကျားသတ္တဝါ ကျနော်ကတော့ အကြင်နာတွေဖက်၍ လက်လွှတ်လိမ့်မည် မထင်ပါနဲ့။
ကျနော်ရဲ့ လျှင်မြန်သွက်လက်လှတဲ့ လက်တွေက အစောရဲ့ အသားစိုင် အသားခဲတွေကို ဆွဲယူဆုပ်ကိုင် ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနေပါတယ်။ ပြေလျော့လျော့ အစောရဲ့ ထမီကို ချွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ခုံးခုံးမို့မို့ ဖောင်းအိ နေတဲ့ အစောက်ဖုတ်ဟာ လက်တဝါးမျှရှိတာကို ကျနော်ဟာ လက်နဲ့ အသာအယာ အုပ်ကိုင်နေသည့်အချိန်မှာ အစောတစ်ကိုယ်လုံး တွန့်၍လာရာမှ‘အို-အကို ဟင့်ဟင့်-ညီမ ရှက်ပါတယ် အကိုရယ်’အဲဒီလို ညီးတွားရွတ်ဆိုနေပြန်ပါတယ်။
ကျနော်ဟာ တစ်ဆင့်ပိုကဲပြီး လက်ဝါးကို အစောစောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်း တစ်လျှောက် တစောင်းပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အစောမှာလည်း တွန့်၍တွန့်၍သွားပြီး သူ့လက်ကလေးနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ လက်များကို ဖက်ယင်း တဟင်းဟင်း ညီးတွားနေရှာတယ်။ ကျနော်လည်း အလွတ်မပေးဘဲ အစောရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ်းဖက်ထားပြီး ပါးမို့မို့ကလေးကိုပါ နှုတ်ခေါင်းကြီးနစ်မြှုပ်သွားအောင် မွှေးကြူလိုက်ပါတယ်။ ပါးကလေးကို မွှေးကြူရာက တဆင့် သန္တာရောင်နှုတ်ခမ်းကလေးကို ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနှင့် ငုံပြီး တမျှင်းမျှင်း စုပ်ယူလိုက်တော့ အစောမှာ အသဲနှလုံးကို ဆွဲယူနှုတ်သလို ခံစားလိုက်ရ၏။
ကျနော်ဟာ အတွေ့အကြုံရှိထားသူမို့ အပျိုရိုင်းပန်းကလေး အစောကို ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းမလုပ်ပဲ အစောစိတ်ပါလက်ပါ ဖြစ်လာစေရန် နူးနှပ်၍နေပါသည်။ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူနေယင်းက လက်ကလည်း အစောရဲ့ အပေါ်အင်္ကျီကျယ်သီးကလေးတွေကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်နေပါသည်။
ကျယ်သီးကလေးတွေ အကုန်လုံးပြုတ်သွားသည့်အခါ တင်းရင်ပြည့်ဖြိုးပြီး လုံးဝန်းနေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာကို အတင်းချုပ်နှောင်ထားတဲ့ အတွင်းခံဇာဘော်လီကလေးကို တွေ့ရတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ အတွင်းခံဇာဘော်လီချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပြီး ခွာလိုက်တဲ့အခါ အတွင်းခံရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှ လွတ်လပ်ပြီဖြစ်တဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာဟာ ထင်းလင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။ လုံးဝန်းသည့် ရွှေအဆင်းဝင်းဝင်းဝါလျက် နို့သီးလေးက ပတ္တမြားခဲပမာ ရဲရဲနီလျက်ရှိပါသည်။
ကျနော်က အစောရဲ့ နို့ကို လက်ဝါးနဲ့ အသာအယာအုပ်ကိုင်ပြီး ဆုတ်ချေပွတ်သပ်ပေးယင်းက ဘယ်လက်ညှိုးနှင့် လက်မကြားတွင် နို့သီးထိပ်ကလေးကို လှိမ့်ကစားပြီး အမျိုးမျိုးနဲ့ ချော့မြူထားရာမှ အစောပေါင်နှစ်လုံးကို ဘေးတစ်ဖက်ဆီ ကား၍ထားပြီး အစောပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲငုတ်တုတ်ဝင်ထိုင်ပြီး ကျနော်ရဲ့လီးနဲ့ အစောရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကိုပွတ်တိုက်ပြီး အသာအယာထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ အစောဟာ တွန့်တွန့်လူးမျှနာကြင်သွားသလိုရှိပြီး လက်ကလည်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားပြီး‘အား.. အမေ့.. အင်း.. နာတယ်.. နာတယ်.. အကိုရယ်’ပါးစပ်ကလည်းပြော ခေါင်းတခါခါနှင့် ရုန်းကန်နေပါသည်။ ကျနော်ဟာ ဆက်မသွင်းသေးပဲ ရပ်ထားရာမှ အစောရဲ့ တုန်ခါနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်ပါတယ်။ နို့သီးခေါင်းကလေးကို ငုံ၍ စုပ်ယူတဲ့အခါမှာ အစောမှာမည်သို့သောအရသာ ခံစားရသည်မသိ။ ပါးစပ်မှ တအင်းအင်း တဟင်းဟင်း ညီးညူနေရှာပါတယ်။
ကျနော်ဟာ သွင်းလက်စလီးကို အသာအယာ အနှုတ်အသွင်းပြုယင်းက‘ညီမ.. နာသေးသလားဟင်..’ လို့ အစောရဲ့ နားနားတိုးကပ်ပြီးမေးတော့ အစောဟာ မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်ထားရာက မပွင့်တပွင့်အသံကလေးနှင့်-‘နာတာပေ့ါ အကိုရယ်’ လို့ဖြေရှာတယ်။
အခုတော့လည်း သူ၏အချော့အမြူ အနှုးအဆွးကောင်းမှုကြောင့် ဖီလင်တက်လာပြန်သည်။ ကျနော်သည် တဝက်သာသာဆောင့်ပေးနေရာမှ အစောခံနိုင်လာမှန်းသိ၍ လီးကြီးကို အဖုတ်ဝသို့ ဒစ်ပေါ်ထိဆွဲထုန်ပြီး ပြန်ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။အရည်များကြောင့် ချောမွေ့စွာဝင်သွားပြီး အစောတစ်ချက်ကော့ပေးလိုက်သော်လည်း အသံထွက်မလာတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျနော့်လီးကို အဖျားအထိဆွဲထုတ်ပြီး အရင်းထိတိုင်ဆွက်တိုက်ကြီး ဆောင့်ချပေးနေတော့သည်။ အစောမှာ ခံစားရသော အရသာများကောင်းနေ၍ ရင်မှာငြိမ့်ကနဲ့ သိမ့်ကနဲ့ ဖြစ်နေရတော့သည်။ တင်းမှာထောင်တနေသော လီးကြီးက အဖုတ်အတွင်းသို့ ဝင်သွားသောအခါ ရင်မှာစို့တက်သွားပြီး ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ ရင်မှာဟာကျန်ခဲ့၏။
ထိုအခါများတွင် အစောသူ့ကို အတင်းပင်ဖက်တွက်ထားမိ၏။ ကျနော်သည် အစောရဲ့ ဒူးနှစ်လုံးကိုဖက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း တချက်ချင်းဆောင့်ဆောင့်သွင်းနေပါသည်။ အစောမှာ ခံစားနေရတဲ့ အရသာက တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာသလိုရှိသဖြင့် ကျနော်ရဲ့ကြောကို တအားဖက်ထားယင်း ‘အချစ်… ချစ်… ချစ်လိုက်စမ်းပါ ကိုရယ်… သဘောရှိအကို’ပါးစပ်ကပြော အောက်ကနေပြီး ခါးကလေးကော့ပေးနေပါသည်။ ကျနော်လည်း အစောကို အစောအလိုကျ အားပါးတရာကုန်းဆောင့်နေပါတော့သည်။အရှိန်ရလာတော့ ကျနော်မှာ စိတ်ကို လွှတ်ယင်း အားရပါးရ ဆောင့်နေမိတော့သည်။ ‘အို.. အကိုရယ် ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပါ.. တကယ်တည်းမှဘဲ အကိုရယ်… အဟင့်အဟင့်’ကျနော်မှာ ပြီးကာနီးမို့ ရှိသမျှအစွမ်းကုန်အားပြုပြီး၊ ဖိ၍ဖိ၍ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေပါသည်။
အစောမှာ လူးလွန့်ရာမှ ‘အဟင့်…ဟင့်.. အကို.. အကို.. နာနာဆောင့်လိုးစမ်းပါ.. တအားဆောင့်စမ်းပါ. ဟုတ်ပြီးအကို.. အား..ဟင့်.. ကောင်း.. ကောင်းလိုက်တာ.. ဟင်းဟင်းဟင်း’ကျနော်လည်း နောက်ဆုံးပြီးကာနီးပြီးဖြစ်၍ အစော၏စောက်ဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းကလေးထဲသို့ အချက်နှစ်ဆယ်ခန့် ဆက်တိုကကြီး ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်ရာ၊ အစောမှာ တစ်ကိုယ်လုံး သိမ့်သိမ့်တုန်ခါပြီး ကျနော့်ကို သိမ်းကြုံးပွေ့ဖက်လိုက်ချိန်မှာ နှစ်ဦးသာ လောကအရသာကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားလိုက်ရပါတော့သည်။ ကျနော့်ဇနီးအစောနှင့်ရခဲ့သည်မှာလည်း ဤအဖြစ်အပျက်ကလေးက စခဲ့ပါသည်။
ကျနော်တို့အိမ်ကလေးမှာ ရွာအစွန်တွင်ရှိပြီး ကျနော်၏ဇနီးအသံကိုလည်း မကြား၊ မီးခိုးလည်းမတွေ့ရ။ ကျနောသည် နွားတင်းကုန်းထဲဝင်လာကာ အိမ်မဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့သည့်တိုင်အောင် အစော၏အသံမှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်နေပါသည်။ ကျနော်အိမ်အနီးကပ်လာကာ ထရံပေါက်မှ ချောင်းကြည့်ရန်အတွက် ကုန်းလိုက်စဉ်မှာပင်-‘ကိုခိုင်.. ပြန်ပါတော့.. အိမ်ကလူကြီးကို ထမင်းသွားပို့ရအုံးမယ်.. ကိုခိုင်ရယ်’ ဟု ပြောလိုက်သံကြောင့် ကျနော်၏ ဦးခေါင်းမှာ ချာချာလည်းသွားတော့သည်။ ထိုအသံကြောင့် လျှင်မြန်စွာ ထရံပေါက်မှ ချောင်းကြည့်လိုက်ရာ၊ ပဒုမပေါင်တို ဇာတ်ခင်းနေသည်ကို ဘွားကနဲ တွေ့ရပါသည်။ ဇာတ်လိုက်က အံ့သြစွာကြုံတွေ့ရပါ၏။ ကျနော်၏ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဖြစ်နေသောကြောင့်ပါ။ သူတို့နှစ်ဦး၏ မြင်ကွင်းမှာလည်း ရှင်းလင်းလှပါသည်။
အင်မတန်မှလည်း ရဲရဲတင်းတင်း ဆက်ဆံနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။‘မြန်မြန်ရှင်.. မြန်မြန်.. ရှင်ဟာ ဇွတ်ကြီးပဲ’‘ဟဲဟဲဟဲ.. ငါက ဇွတ်မဟုတ်ရပါဘူးကွာ.. မင်းကစလို့ ငါကလိုးနေရတာမဟုတ်လား’ခိုင်ဦး၏အသံက ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျနော်သည် သူငယ်ချင်းကို ယုံစားမိသောကြောင့်လာ၊ တဖန် ကျနော့်မိန်းမ အစောကိုယ်တိုင်ကလည်း တဏှာကြီးလှသော မိန်းမတဦးမို့လား၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်အဖို့ အတော်ကလေး ဒေါသဖြစ်လာသော်လည်း၊ သူတို့နှစ်ပါကြည်ဇာတ်ထုတ်ကို အစအဆုံးကြည့်နေမိပါသည်။ ခိုင်ဦးရော အစောပါ အဝတ်အစားမရှိကြပါ။ အစောမှာ တကိုယ်လုံးဖြူဖွေးသောအဖြစ်က သူ၏တင်ပါးကြီးတွေ ကော့ကော့ကာ ထုံးစံအတိုင်းပင် ကော့ပေးနေသလို ခိုင်ဦးကလည်း အစော၏ပေါင်နှစ်လုံးကို သူ့အပေးဆွဲတင်ကာ ဒလကြမ်း အသောနှင်လျက် ကာမဇာတ်ထုတ်ကြီးကို သွင်သွင်ကြီးခင်းနေပါ၏။
ခိုင်ဦး၏လီးကြီးကလည်း အတော်ကလေးပင် ခေါ်တောဆန်ဆန်ကြီးမားလှသလို တအားဆောင့်ကာဆောင့်ကာလိုးလိုက်သောအခါမှာတော့ အစော၏တင်ပါးကြီးတွေပင် ကြုံ့ကာကြုံ့ကာ ဝင်သွားတော့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျနော်၏စိတ်တွေမှာလည်း မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ကာလာရပါ၏။ ခပ်စောစောက ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းအပြည့်နှင့် မိုးသဲလေသဲပြေးလွှားလာရခြင်းတွေသည် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကွယ်၍ သွားတော၏။
ကျနော်သည် နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပါသည်။ ကျနော်လာခဲ့သည်မှာ သိပ်မကြာလှသေးပါ။ ထိုသို့သောအချိန်ဝယ် ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကို သုတ်သင်ပစ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်မို့ ကျနော်သည် နံရံတွင်ထိုးထားသော ကိုင်းခုတ်ဓားကိုယူ၍ အိမ်ပေါ်သို့ လျှင်မြန်စွာတက်ပြီး သစ္စာဖောက်သော သူငယ်ချင်းနှင့် ဖောက်ပြန်သော မိန်းမကို အဆုံးစီရင်လိုက်ပါတော့သည်။ အလှည့်မရှောင် ဝရမ်းပြေးဂျပန်များကြီးစိုးသောအချိန် ကျွန်တော်ရွာတွင် မနေရဲတော့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော့်မိန်းမ အစောနှင့် ခိုင်ဦးကို သတ်ခဲ့မိသည့်အတွက် ကျွန်တော် ဝရမ်းပြေး လူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ကျနော်ထွက်ပြေးလိုက်ခြင်းမှာ ပိုဆိုးသွား၏။ ကျနော်ထွက်ပြေးရာကပင် အထူးနာမည်ကြီးလှသော ဓားမြ ဗိုလ်ယက္ခလက်အောက်သို့ ရောက်သွား၏။ ကျနော်မှာ ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့်အပြင် လူသတ်ဝရမ်းပြေးတစ်ယောက်မို့ ဗိုလ်ယက္ခအနေဖြင့် အတော်ကလေးသဘောကျသွားပြီး ကျနော့်ကို သူကိုယ်တိုင် သေနတ်ပစ်သင်ပေးမည့်အကြောင်း ပြောပါသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလှသည်မှာ ဗိုလ်ယက္ခတွင် မိန်းမနှစ်ယောက်ယူထားခြင်းဖြစ်ရာ၊ တစ်ဦးက အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးဖြစ်သလို တစ်ဦးကလည်း အသက်နှစ်ဆယ်ခန့်ကော်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ရုပ်ချောကလေးတွေဖြစ်ရာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရောဘာမျှ အပြစ်ဆိုစရာတစ်ရွေးသာမျှမရှိပါ။
ယခုလို အချောအလှကလေးတွေမြင်ရသောအခါ ကျနော့်ရင်ထဲလှုပ်ရှားသွားသည်ကတော့ မှန်ပါသည်။ ကျနော့်ကို ဗိုလ်ယက္ခက သေနတ်ပစ်သင်ပေးရာတွင် ဆယ်ရက်အတွင်း ခြောက်လုံးပြူရော ရိုင်ဖယ်အပစ်ပါ ကျွမ်းကျင်ခဲ့လေ၏။ နောက်ဆုံတွင် ကျနော်မှာ ဗိုလ်ယက္ခ၏ လူယုံတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့၏။ သူသည် ကျနော့်ကို စိတ်ချယုံကြည်သည့်အတိုင်း တစ်ခါတစ်ရံ စခန်းတွင် အစောင့်ထားခဲ့သည်။
တစ်နေ့မှာတော့…‘ရှင့်ကိုကြည့်ရတာ တမှိုင်မှိုင်နဲ့ မမတို့ဆီမှာနေရတာ မပျော်ဘူးလား’အနှင်းမှာ ကျနော့်ထက် အများကြီးငယ်သည့်တိုင်အောင် သူ့ကိုယ်သူ မမဟု ခေါ်ခဲ့သည်ကြောင့် ကျနော်က သိပ်ပြီးရီချင်နေပါသည်။ ‘ရှင်ဒီမှာနေရတာ မပျော်ဘူးလား’‘ပျော်တယ်ဗျာ… ပျော်တယ်’‘အမလေး.. ရှင်ကလည်း စိတ်ကြီးပါဘဲလား’‘လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်တစ်ခုတော့ ရှိတာပေ့ါ’‘ဟား.. ဟား.. ဟား.. သိပ်ရယ်စရာစကားပြောတဲ့လူဘဲ.. ရှင်ဘာလဲ.. ရီးစာပျက်လာလို့လား.. ဒါမှမဟုတ် မယားလင်ငယ်နေပြီး သူများနောက်လိုက်သွားလို့လား’ထိုစကားကြားလိုက်သောအခါ ကျနော့်မှာ အနာပေါ်ဒုတ်ကျသွားသလို ဆတ်ဆတ်ခါ နာမိလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဗြုံးကနဲ မတ်တပ်ရပ်ကာ အနှင်း၏ ပုခုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကလေး ဆွဲကိုင်မိ၏။
‘ရှင်ကျမပြောလိုက်တာများ စိတ်ဆိုးသွားသလားဟင်’‘ကျနော့်ကိုထပ်မံပြီး ဘုစကားပြောတာထက် ခင်ဗျားလင်တော်မောင် ငွေဘယ်လောက်.. ရွှေဘယ်လောက် ရလာမလဲ တွက်နေတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်နှော’‘ကျမဟာ ရွှေငွေမက်တဲ့ မိန်းမမဟုတ်သလို သူ့ကိုလည်း ချစ်လို့ယူရတာမဟုတ်ဘူး အတင်းဓားမြတိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ထားလို့ ယူနေရတာ’‘အနှင်းက ရဲတင်းစွာပင် ကျနော့်လက်ကိုကိုင်ပြီး‘ကျမရှင့်ကို အားကိုးပါရစေလား’
‘ကျုပ်.. ဗိုလ်ယက္ခကို သစ္စာမဖောက်ဘူး’‘ကျမ.. ရှင့်ကို မြင်မြင်ချင်းဘဲ အားကိုးတယ်.. ယုံကြည်မိတယ်.. ကျမကိုသာ ကယ်မယ်ဆိုရင် ရှင့်သဘောရှိပါ.. ရှင့်ကိုလဲ မြင်မြင်ချင်း ချစ်နေခဲ့မိတာဘဲ’သူမသည် ကျနော့်ရင်ခွင်အတွင်း သူ့ကိုယ်လုံးကလေး ပစ်လှဲချလိုက်ပါသည်။ ကျနော့်စိတ်တွေမှာ ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားရ၏။
မိန်းမတွေ ဖောက်ပြားမှုက လက်တွေ့တွေနေရချေပြီ။ ကျနော့်ချစ်ဇနီးအစောသည် ကျွန်တော်မရှိတုန်း နောက်မီးလင်းခဲ့သလို ဗိုလ်ယက္ခဇနီးချောကလေးမှာလည်း နောက်မီးလင်းရန် မြူဆွယ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်က သူမကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွန်းဖယ် ပစ်လိုက်သောအခါ သူမက နှုတ်ခမ်းကလေးစူလိုက်ကာ ‘ရှင်.. ကျမကို မချစ်ဘူးလား’‘ငါ.. မင်းကို သနားတယ်.. ပြီးတော့ သစ္စာလည်း မဖောက်ချင်ဘူး’‘ရှင်တော်တော်မိုက်တာဘဲ.. ဒီနေရာမျိုးဟာ လူပြတ်တဲ့နေရာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး၊ ရှင့်ကို ကျမကချစ်နေတယ်.. ပြောင်ဘဲပြောတဲ့ဟာကို ငြင်းပယ်ရင် ရှင့်ဆရာကို ကျမက တနည်းနည်းနဲ့ ဂျောက်တွန်းရမှာဘဲ’ကျနော်သည် ထောင်းကနဲ့ ဒေါသထွက်သွားပါသည်။
ထို့ကြောင့် သူမပုခုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး‘မင်းလဲ နောက်မီးလင်းချင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယေက်ဘဲ.. ကဲ.. မင်းလိုချင်တာ ကာမဘဲမဟုတ်လား.. ရှင်းရှင်းပြောဟေ့ ကျုပ်က ရှင်းရှင်းဘဲကြိုက်တယ်’ကျနော်က ထိုကဲ့သို့ မျက်လုံးမျက်ဆံပြူးမေးလိုက်သောအခါ အနှင်းမှာ မျက်နှာကလေးပေါ်တွင် သွေးခြေဥကလေး ပေါ်ထွက်လာကာ ရှက်သွားဟန်ရှိပါသည်။ ‘ခုမှ ရှက်မနေပါနဲ့ကွာ.. ကဲ.. ကဲ.. ငါ့ကိုလည်း ဂျောက်မတွန်းနဲ့တော့.. မင်းအင်္ကျီတွေ ချွတ်စမ်း’‘အို ဘာလို့ချွတ်ရမှာလဲ’ဒီတစ်ခါတော့ အနှင်းမှာ ပိုမိုရှက်သွားဟန်တူပါသည်။ ကျနော်က ခပ်ချဉ်ချဉ်ရှိလေသောကြောင့် သူကလေူအား ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
‘မင်းအခုမှ ရှက်နေသလား.. ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆို ငါကလည်း ဘွင်းဘွင်းဘဲ.. ခပ်ရှင်းရှင်းဘဲ ချစ်ပြမယ်.. မင်းရဲ့ တကိုယ်လုံး အဝတ်အစားတွေချွတ်ကွာ’ကျနော်မှာ ခပ်စောစောကလို မဟုတ်တော့ဘဲ ယခုလို နီးနီးစပ်စပ်ရှေ့တော်ရောက်လာသူလေးအား လက်မလွှတ်ချင်တော့၍ ဆူဆူဖြိုးဖြိုးကိုယ်လုံးကလေးကို ဗြုံးကနဲ ဆွဲယူကာ သူကလေး၏ပါးရော လည်ပင်းပါ ဒလစပ်နမ်းလိုက်မိသည်။
ကျနော်၏ မြန်ဆန်မှုမှာ အံ့သြစရာ သူမ၏ယောက်ျားအကျီသဖွယ်ချုပ်ထားသော စစ်အင်္ကျီကျယ်သီးတွေကို ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ကျယ်သီးတွေ ပြုတ်သွားလျှင် အတွင်းမှ တင်းတင်းရင်းရင်း ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးနှင့် ဖွံဖြိုးကားပေါ်ထွက်နေသော အတွင်းခံဘော်လီအင်္ကျီအတွင်းမှ ရင်သားအနည်းငယ် ပေါ်ထွက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယခုအခါတွင် အနှင်းမှာ မြေပြင်ပေါ်တွင် ကိုယ်ကိုလှဲချလျက် ဘော်လီအင်္ကျီမှ တွယ်ထားလေသော ဂျိတ်ကြီးများကို သူမကိုယ်တိုင်က ရက်ရက်ရောရောနှင့် ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ပါသည်။
ဘော်လီဂျိတ်ကလေး ပြုတ်သွားလျှင် ဝင်းဝင်းဝါဝါနှင့် တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်ကလေး ရင်သားအစုံမှာ ကျနော့်နှလုံးကို ခုန်၍သွား၏။ ကျနော် သူမ၏ပါးမို့မို့ကလေးကို ကုန်း၍နမ်းလိုက်ပါသည်။ အနှင်းမှာ ကျနော်၏ ရင်ပတ်ကျယ်ကြီးအောက်တွင် ပြားပြားဝပ်နေပါသည်။ သူမ၏အလှဖူး ရင်သားထိပ်မှ နို့သီးလုံးကလေးတွေကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ယူနေရာကပ် ကျနော်၏လက်များမှာ သူမ၏အောက်ပိုင်းကို တရွေ့ရွေ့ ပွတ်သပ်နေမိရာ နှင်း၏ ဖြူဖွေးတုတ်ဖြိုးနေသော ပေါင်တံကြီးတွေက အလိုလိုပင် အပေါ်သို့ ထောင်ကားလာပါတော့သည်။
သူမ၏ ပိုးပျော့ထမီကလေးမှာလည်း လျှောကနဲနေအောင်ပင် မြေပြင်ဝယ် ပုံကျသွားလေတော့သည်။ ထိုအခါမှတော့ အအိုဟုသာ ဆိုလင့်ကစား ဖောင်းဖောင်းကြွကြွဖြိုးဖြိုးလှလှ အသားအစိုင်အခဲကလေးများမှာ သူ့နေရာနှင့်သူ အပြစ်ဆိုမရအောင် တည်ရှိနေသလို နှစ်သွယ်သော မျက်နှာသွယ်ကြားမှ စောက်ဖုတ်ကလေးသည် ဖူးပွင့်ကာ ခိုနားချင်စဖွယ်တည်ရှိနေ၏။
ကျနော်သည် အနှင်း၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ပွတ်သပ်ပေးယင်း နို့သီးကလေးကို စုပ်ယူနေရာမှ လျှာဖြင့်ထိုးကလိပေးလိုက်သည်။ အနှင်းမှာ တွန့်တွန့်သွားကာ ရင်ကိုကော့ပေးနေယင်းမှ‘အဟင့်ဟင့်.. ယားတယ်.. အဟိ’ကျနော်သည် အထက်ပိုင်းရှိ နှုတ်ခမ်း၊ လည်တိုင်၊ ရင်သား၊ ခါး၊ နောက်ကြောပြင်တို့ကို ပွတ်သပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကာမခလုတ်တို့ကို ဖွင့်လေသည်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း အနှင်း၏ အတွင်းသားတို့ကိုလည်းကောင်း၊
ပေါင်ဂွဆုံရှိ ဖောင့်မို့မို့စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်လေရာ အနှင်းမှာ တဟင့်ဟင့် ကာမဆိပ်များ တကိုယ်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့ကုန်၏။အနှင်း၏ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကလေးမှ ပြူးထွက်နေသော စောက်စေ့ကလေးကို လက်ညှိုးနှင့် လက်မညှပ်ကာ အသာအယာဆွဲပေးသောအခါ အနှင်းမှာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွား၍ စောက်စေ့ကလေးမှာလည်း မာတတ်တတ်နှင့် ချွန်တောင်မတ်လာလေသည်။အနှင့်မှာ ကာမအဓိကသော့ချက် စောက်စေ့ကလေးကို သေချာစွာ ကလိခံနေရသောကြောင့် ခါးကလေးတွ့န်တွန့်ကာသွား၏။
ဖင်ကလေး မြှောက်မြှောက်ကာ သွား၏။ လျှပ်စစ်နှင့် တို့သလို ဖြတ်ဖြတ်လူးမျှ ခံစားနေရ၏။ ‘အို.. ယားတယ်- အဟိ.. ကျမမနေနိုင်တော့ဘူး၊ စောက်ဖုတ်ထဲက သိပ်ယားလာပြီ- လုပ်ပါတော့- ဟင်းဟင်းဟင်း’အနှင်းမှာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်လာကာ ကျနော့်ကို တင်းကြပ်စွားဖက်ထားတော့၏။ အနှင်း၏စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်၍ပွတ်သပ်ပေးနေသော ကျနော့လက်များကြောင့် ကာမစိတ်များ ထကြွလာကာ အနှင်း၏စောက်ဖုတ်မှ အရည်ကြည်တို့ စိုစိစိ ဖြစ်နေလေ၏။
ကျနော့အဖို့ သည်လိုအခြေအနေတွင် ပိုကောင်းသောကြောင့် အနှင်းကိုယ်လုံးကလေးကို မြေပေါ်တွင်လှဲလိုက်စေသည်။ အနှင်း၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဘေးသို့ကားလိုက်စေရာ ဖြူဖွေး၍ ဖောင်းဖောင်းအိနေသော စောက်ဖုတ်မှာ ဟပြဲကလေး ဖြစ်သွား၏။ စောက်စေ့ကလေးအောက်မှ စောက်ခေါင်းကလေးမှာ ခံချင်လာပြီး ပွစိပွစိဖြစ်နေလေသည်။ ကျနောသည် ဝတ်ထားသောပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်၏။
ထိုအခါ ကျနော့်လီးကြီးမှာ အနှင်း၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ပျော်မြူးနေချင်ရှာသောကြောင့် တဆတ်ဆတ်နှင့် ခေါင်းညိမ့်နေရှာလေသည်။ကျနော်သည် တဆတ်ဆတ်နှင့် မာ၍တောင်နေသော လီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်၍ အနှင်း၏ပေါင်ကြားထဲသို့ ဆောင့်ညောင့်ဝင်ထိုင်ပြီး အနှင်း၏စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကလေးကို အထက်အောက်ပွတ်တိုက်ပေးရာ အနှင်းမှာ ကိုယ်ကလေးတွန့်၍ ဖင်ကိုမြှောက်ပေးယင်း- ‘အကိုရယ် ကျမသိပ်ယားလွန်းလို့ လိုးမှာဖြင့် မြန်မြန်လိုးစမ်းပါ’အနှင်းမှာ ရမ္မက်တံခိုးများတက်ကြွသောလေသံဖြင့် ကျနော့်ကို တစ်လုံချင်းပြောနေ၏။
ကျနော်သည် ရှုံ့လိုက် ကျယ်လိုက်ဖြစ်နေသော အနှင်းစောက်ဖုတ်အဝကို ကျနော့်လီးထိပ်နှင့် တေ့၍ အသာဖိချလိုက်ရာ အနှင်း၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးတစ်ချောင်းလုံး တင်းကြပ်စွာ ဝင်သွားတော့၏။ ‘အား- ကောင်းလိုက်တာရှင်ရယ်’အနှင်းမှာ သူမစောက်ခေါင်းထဲဝင်စေချင်သော ကျနော့်လီးကြီး ဝင်သွားသောကြောင့် ကာမဆန္ဒပြည်ဝသွားလေသည်။ ကျနော်သည် လီးကို အနှင်းစောက်ဖုတ်ထဲသို့ အရင်းအထိ သိပ်သွင်းကာ ဖိကပ်ထား၏။ ထို့နောက် အသာပြန်ကြွ၍ တဖတ်ဖတ်နှင့် ကြွချီ ထိုးချီ လိုးနေလေတော့၏။
အနှင်း၏စောက်ဖုတ်၊ စောက်စေ့နေရာ၊ အချိုင့်အရှိုက်၏ ဖောင့်မို့သော နှုတ်ခမ်းသာတို့နှင့် ကျနော့်လီးအရင်းထက်နားမှ အသာပြင်တို့ ရိုက်ခတ်သံကြောင့် တဖတ်ဖတ် တဖောက်ဖောက် မြည်သံတို့မှာ ဆူညံနေ၏။ ကျနော်၏လီးကို အနှင်း၏စောက်ဖုတ်မှ ဆွဲအနှုတ်တွင် ပြွတ်ကနဲအသံကြားရသလို ပြန်၍ဆောင့်သွင်းလိုက်သောအခါ စွိ ဟု ထွက်လာပြန်သည်။ အမှတ်တမဲ့ဘေးမှ နားထောင်နေသူရှိပါက ထိုနေရာမှာပင် ထိုအသံနှင့် ယောက်ျားမိန်းမမရွေး ကာမအရေတို့ ထွက်ကျနိုင်ပေ၏။အနှင်းမှာ ကျနော့်ပုခုံးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ကိုင်၍ ကော့၍ကော့၍ပေးနေလေ၏။ ထို့ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြွက်သားမှာ ရှုံ့ရှုံ့သွားရာ ကျနော်၏လီး ပြန်အသွင်းတွင် ကျပ်ကျပ်သွား၏။ ကျနော့မှာ ပို၍ပို၍ ကောင်းမွန်နေ၏။
ကာမဖီလင်များ တဖြည်းဖြည်းတက်လာသောကြောင့် နှစ်ဦးစလုံး ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သွားကြကာ ကျနော့လီးမှ သုတ်ရည်များ အနှင်းစောက်ဖုတ်ထဲသို့ နွေးကနဲ တဆစ်ဆစ် ထွက်ကုန်လေသည်။အနှင်းမှာ ကျနော့်ကိုယ်လုံးကို တအားဖက်၍ တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားလေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဖက်ထားသော လက်များ ပြေလျော့သွား၏။ ကျနော့်လီးမှ သုတ်ရည်များက အနှင်း၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ အပြင်သို့ ဖင်ကြားမှ စီးဆင်းကာ ပုဆိုးပေါ်သို့ စိုကုန်လေတော့သည်။
အနှင်း၏ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မှာ အစောထက်ပင်သာလှ၏။အနှင်းက အစောလောက်ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် မဖွံ့ဖြိုးပေမဲ့ တင်ကြီးတွေက အစောထက်ပင် စွဲမက်စရာကောင်းနေပါသည်။ထမီမရှိသော တင်ပါးနှင့်အတူ ဖြိုးဖြိုး မြမြ ကြွကြွရွရွလှပလေသည့် ပေါင်တံတွေနှင့် သွယ်ဖြာသွားလေသော ခြေသလုံးသားများက သူမ၏အလှသရုပ်ကို အင်မတန်မှ အထောက်အကူဖြစ်လေ၏။တဖန်သူမ၏ မျက်လုံးမျက်ခုံး မျက်တောင်များအောက်မှ မျက်လုံးးများမှာ ပတ္တမြားလေးနှစ်လုံးပမာ တလက်လက်ဝင်းလက်လျက်ရှိ၏။
အပျိုတုံးကဆိုလျှင် ထိုမျက်လုံးအစုံမှာ အဘယ်မျှ ပိုမိုကြည့်ကောင်းမည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်အောင်ဖြစ်ရ၏။ ယခုပ်င သူကလေး၏ မျက်လုံးအစုံမှာ အညှို့ဓာတ်အပြည့်နှင့်အတူ သူမ၏ တင်ပါးကြီးတွေကို မြှင့်ကာ မြှင့်ကာပေးလိုက်ယုံမက သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ရမ္မက်ဇောပြင်းထန်ပြီး ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို တအားကုန်ငုံ၍စုပ်ယူလိုက်၏။လည်ပင်းတွေကိုရော နားရွက်တွေကိုပါ မနာမကျင်ကိုက်လိုက်ပြီး တဟင့်ဟင့် ဖြစ်နေရှာ၏။
သူမသည် ကျနော်၏ကြောပြင်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အသကုန်ဖက်ထား၏။ လက်တဖက်ကလည်း ကျနော်၏ခါးကို ထိုးလိုက်။ ရင်ပတ်ကျယ်ကြီးကို ဆွဲလိုက်နှင့် ရမ္မက်ဟုန်ကို ပြသလျှက်ရှိပါသည်။ ကျနော်နှင့် အနှင်းတို့မှာ ဘက်ညီညီ၊ ကျနော်ကလိုးလိုက်၊ ဆောင့်လိုက်တိုင်း သူမက အကော့၊ အပင့်၊ အမြှောက်တို့နှင့် ပေးနေသည်မို့ ကျနော်က ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ပြလိုက်ရာတွင် သူမမှာ ခါးကလေး ခွက်ဝင်သွားသည်အထိ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ အသံမြည်သွားသလို အပြုံးပွင့်တွေမှာလည်း ဝင့်ကာ ဝင့်ကာလာသည်ကို တွေ့ရ၏။
နောက်ဆုံးမတော့ သူကလေးက‘ရှင်ဟာ ကျမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ယောက်ျားတွေထဲမှာတော့ စွဲမက်စရာပါဘဲရှင်’‘ရှင်က ကျမကို မေ့သွားပြီပေ့ါလေ’‘အို-ဘယ်မှာ မေ့နိုင်မှာလဲအနှင်း တကယ်ပါ- အနှင်းကို မမေ့ပါဘူး’ကျနော်မှာ ယခုအခါ မိန်းမတွေသဘောကျအောင် ပြောဆိုတတ်သောအနေအထားကို ရောက်ခဲ့ပြီမို့ အရင်က မိန်းမတွေကို မုန်းလို့ ကင်းကင်းနေခဲ့သလောက် ယခုတော့ မိန်းမတွေကို ကိုယ်ကချော့နိုင်သလောက် သူတို့ကလေးတွေကို ကိုယ်ကလိုက်ပေးနိုင်သဘောက် ကိုယ့်အတွက် ဘဲရီးဂွတ်ပါလား ဟူသောအတွေးဖြင့် ဆေးဆောင်စရာမလိုသောအဖြစ်ကို ရောက်လာရပါတော့သည်။ဗိုလ်ယက္ခ အပြင်ထွက်သွားသည်ဆိုလျှင် နေ့တိုင်းဆိုသလို အနှင်းမှာ ကျနော့်ထံရောက်လာစမြဲဖြစ်ရာ တီတီတာတာ ပြောဆိုနေမြဲဖြစ်ပါတော့သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged နောကျမီး ဖွာသူမြား